Umkhiqizi Nomhlinzeki Wensimbi Yesiliva YaseChina | ZHJ
Intengo ye-FOB: US $ 480 - 700 / Amathani
Min.Order Ubuningi: 1 Ton / Amathani
Amandla Wokunikezela: 10 Ton / Amathani Inyanga ngayinye
Oxhumana nabo, ama-breaker breaker, ama-thermostats, ukushintshwa okuhlakaniphile, njll
I-Ag / FAg, AgNi, AgCdO, AgZnO, AgSnO2, AgSnO2In2O3
Isiliva nokusanhlamvu okusanhlamvu okuhle (i-FAg) kune-conductivity ephezulu kakhulu kagesi neyokushisa, ukumelana kokuxhumana okuphansi nokuzinzile, nokusebenza okuhle. Okokumelana nesiliva ekugugulekeni kwe-arc nokushisela oxhumana nabo kunqunyelwe, amandla emishini aphansi, Ngenxa yenani elincane le-nickel kusiliva elicolekile lokusanhlamvu, ukumelana nokuguguleka kwe-arc namandla we-mechanical kuphakeme kunokwesiliva.
Isetshenziswa kabanzi kumadivayisi wamanje aphansi, njengokudlulisela, izibali sikhathi, ukushintshwa okusizayo kwemishini yasendlini, amaswishi wokulawula, njll.
Okuqukethwe kwe-Ag (wt.%)
Elec. Ukuhlala kabusha (pQ • cnn)
Inqubo yokukhiqiza Ukudlulisa-Rolling Ukudlulisa -Ukudweba Ukudlulisa-Rolling Ukudlulisa -Ukudweba
Izinto ze-AgNi zinokuphikisana okuphezulu nokuguguleka kwe-arc nokushisela oxhumana naye kune-Ag noma i-FAg. Zombili lezi zakhiwo ziyathuthukiswa ngokunyuka kokuqukethwe kwe-Ni. Zonke izinto ze-AgNi zibonisa ukusebenza okuhle futhi kulula ukuwelda ukuxhumana nezinsizakalo. Ukuthambekela okuphansi kokudluliswa kwempahla kuzinhlelo zokusebenza ze-DC. Izinto ze-AgNi yizinto zokuvikela imvelo.
Izinto zokuxhumana ze-AgNi zithola uhlelo lokusebenza oluningi kumadivayisi ashintsha amandla amancane. Zisetshenziswa ekudluliseni, okokuthinta okuncane, amaswishi alula, izilawuli zamazinga okushisa kanye nasekushintsheni okuvikelayo (kusetshenziswa ngazimbili zokuxhumana ezingalingani, ngokwesibonelo, ngokumelene nezinto ze -AgC, AgZnO nomaAgSnO2).
Okuqukethwe kwe-Ni (wt.%)
Ukuphindisela emuva (pC2 • cm)
Oxhumana nabo be-AgCdO bangabeqembu labasetshenziswa kakhulu emkhakheni wezinto zokusebenza zikagesi ezinamandla amancane. Bahlanganisa ukumelana okwenelisayo ngokumelene nokushisela othintana nakho nokumelana okuhle kokuguguleka kwe-arc kanye nokumelana kokuthintana okuphansi phakathi kwempilo yenkonzo yayo ephelele. Akhiqizwa ngamasu amabili ahlukene, i-pre-oxidation-sintering-extruding ne-oxidation yangaphakathi. Ezimweni zombili okuqukethwe kwe-Cd0 kungahle kusuka ku-10 kuye ku-20wt.%. Kodwa-ke, i-Cd ne-Cd0 kuthathwa njengokuyingozi empilweni nasemvelweni. Ngalesi sizathu ukusetshenziswa kwezinto ze -AgCdO kuzovinjelwa emazweni amaningi.
Ikakhulu esetshenziswa cishe kuzo zonke izinhlobo zamandla aphansi okushintsha amadivayisi. Zijwayele ukusetshenziselwa ama-microswitches, ama-relays, ama-switch light, ama-contactors, amaswishi wezinto zasendlini, ezinye izinhlobo zokushintsha okuvikelayo, kanye nezinhlobo ezithile zama-breaker wesifunda.
Izintambo AgCdO AgCdO AgCdO AgCdO AgCdO AqCd0 AgCdO
Okuqukethwe kwe-CdO (wt.%) 10 ± 1 13.5 ± 1 15 ± 1 10 ± 1 12 ± 1 15 ± 1 17 ± 1
Ubuningi (g / cm3) .010.05 .9.95 .9.90 .1010.10 .010.05 .9.95 .9.80
Ukuphindisela emuva (1.10 • cm) .22.25 .32.35 .2.40 .102.10 .12.15 .22.25 .2.40
Ukuqina HV ≥70 ≥75 ≥75 ≥70 ≥70 ≥75 ≥75
Amandla eqine (MPa) 260-350 260-380 260-380 260-350 260-380 260-380 260-400
Ukunwebeka (%) 6-20 6-20 6-20 8-25 8-25 8-25 5-25
Inqubo yokukhiqiza Pre-namachibi-Sintering-Extruding Ukuxhuma Kwangaphakathi
Ukumelana okuphezulu kokushisela othintana nakho kuveza izinto ze-AgZnO. Zikhombisa futhi ukumelana okuhle nokuguguleka kwe-arc. Ukumelana nokuxhumana kwe-AgZnO kuvame ukuba ngaphezulu kune-AgCd0. I-AgZnO ingakhiqizwa ngokusebenzisa i-pre-oxidation-sintering -extruding, amasu wokuxuba-wokuhlanganisa kanye ne-oxidation yangaphakathi. Izinto ze-AgZnO ziyimvelo-izinto zokuvikela.
Isetshenziswa kakhulu kuma-breaker wesekethe, ikakhulukazi kuma-breaker wesifunda wonke. Eminye imikhakha yesicelo ukushintshwa kwemishini yokuvikela, ama-breakers wesifunda asele kanye nama-AC relays.
Okuqukethwe kwe-ZnO (wt.%)
Ukuphinda usebenze kabusha (NO • cm)
Amandla eqine (MPa) 285-350
I-AgSnO2 / AgSn021n203 yizinto zokuxhumana zikagesi ezinobungane. Banokudlala okuhle ezindaweni zokulwa nokuguguleka kanye nezokulwa nezinsimbi, futhi banempahla enhle yokudlulisa impahla ekushintsheni kwesifunda seDC. Izinqubo eziyinhloko zokukhiqiza ziyinqubo yokufaka i-oxidation yangaphakathi, inqubo ye-pre-oxidation, inqubo yokusansimbi ye-powder, inqubo yokumboza ngamakhemikhali, njll.
Kabanzi izinhlobo ezahlukene contactors, udlulisela, wesifunda amadlambi kanye ukushintshwa, njll
Okuqukethwe kwe-SnO2 (wt.%)
Elec. Ukuhlala kabusha (pO • cm)
Elec. Ukuhlala kabusha (10 • cm)
I-AgSnO2lAgSn021n203 yizinto zokuxhumana zikagesi ezinobungani. Banokudlala okuhle ezindaweni zokulwa nokuguguleka kanye nezokulwa nezinsimbi, futhi banempahla enhle yokudlulisa impahla ekushintsheni kwesifunda seDC. Izinqubo eziyinhloko zokukhiqiza ziyinqubo yokufaka i-oxidation yangaphakathi, inqubo ye-pre-oxidation, inqubo ye-powder yokusansimbi, inqubo yokumboza ngamakhemikhali, njll.
Elec. Ukuqina (p0 • cm)
Langaphambilini Izeluleko Zokuxhumana Ngogesi
Olandelayo: Oxhumana nabo bensimbi
I-AgCdo10 Wire Wire